Umphakathi ukhalaza ngamanzi | News24
Umphakathi ukhalaza ngamanzi
Isithombe: sithunyelwe UMnuz Mali Sithole ekhalaza ngokuvalwa kwamanzi.
AMALUNGU omphakathi waKwaNgcolosi awagculisekile ngesimo esibahlukumeze izinyanga ezintathu sokuvalwa kwamanzi.
Ilungu lo mphakathi elixoxisane nentatheli yeFEVER uMnuz Mali Sithole, uthe le nkinga yokuvalwa kwamanzi ibukeka sengathi izothatha isikhathi eside.
Uthe: “Singabahlali baKwaNgcolosi sizwakalise izikhalo zethu kwi Khansela le ndawo kodwa kuyi manje isimo sisefana amanzi awaphumi empompini.”
Uthe umphakathi waziswa ngoMasingana (January) ukuthi kune nkinga ezimayini njengoba yadilika.
Uqhube wathi batshelwa ukuthi amanzi azovalwa isikhashana. “Singu mphakathi waKwaNgcolosi satshelwa ukuthi amanzi azovalwa isikhashana kodwa siyethuka uma sesibona amanzi engasabuyi nhlobo. Le senzo sisi shiye sidiniwe ngoba umphakathi uthwele kanzima njengoba amanzi engekho. Asikwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi ngoba asikwazi ukugeza kahle, ukupheka nokuya endlini encane ngendlela ehlanzekile. Lokhu kuhlukumeza nezingane zethu ngoba bathwala kanzima njalo ekuseni uma sekumele baye esikoleni,” kusho uMnuz sithole.
Uthe njengoba amazi evaliwe lokhu kuzodala izifo eziningi.
“Njengoba amanzi evaliwe lokho kudala ukuthi kube nokungahlanzeki endlini encane ngoba akekho ongazi ukuthi indlu encane isebenza ngamazi. Lokhu kuzodala izifo eziningi emphakathini ezidalwa ukungcola.”
Uthe uMasipala weTheku ufake ama thange endaweni kodwa inkinga wukuthi lama thange awafinyeleli kwamanye amalungu omphakathi ngesikhathi esifanele.
“UMasipala usifakele ama thange amanzi kodwa amanye amalungu omphakathi awahlomuli kulokho ngoba ayashesha ukuphela okusho ukuthi sibaningi emphakathini futhi amaloli athulula amanzi ahamba emgwaqeni owodwa akhohlwe wukuthi kune mizi eminingi emakhaya futhi eminye yawo inezaguga ezingenawo amandla okuhamba okusho ukuthi aziwatholi nhlobo amanzi. Sesilinde isikhathi eside siyanxusa uMasipala uzwe ukukhala kwethu,” kusho uMnuz Sithole.
Elinye ulungu lo mphakathi uMnuz Blessing uthe umphakathi usalinde izimpendulo ezivela kwi khansela.
“Kade saphakamisa isicelo sokubuyiselwa amanzi kodwa uKhansela namanje akasiniki izimpendulo futhi lokho kuyasidumaza. Sikhathele ilesi simo yingakho size sabize iphephandaba iFever ukuthi lishicilele lolu daba okuno kwenzeka ukuthi khona ozosizwa isikhalo sethu, sikhathele ukuphiliswa kanzima” kusho uMnuz Blessing.
UKhansela Themba Shelembe waku ward-8 uthe: “Ngiyasazi isimo esibhekene nomphakathi waKwaNgcolosi kodwa ngixhumane noMasipala ukuze ufike namaloli anama thange amanzi emphakathini, ngafake nama thange akwa-Jojo kulabo ambahlala emakhaya. Ngiphinde ngaxhumana noMeya weTheku kanye neMenenja yeTheku ukuze ngibazise ukuthi isimo esibhekene nomphakathi siyaphuthuma futhi sibucayi, njenga manje kube nesivumelwano sokuthi kuqalwe i-project yokufakwe kwamapayipi amanzi,” kusho uKhansela uThemba Shelembe.
Uqhube wathi le-project izothatha izinyanga eziyi-6 kuya kweziyi-9. “Ngiyanxusa amalungu omphakathi ukuthi ehlise umoya ebekezele njengoba isiqalile le-project sifuna lo msebenzi wokufakwa kwamapayipi uphethwe ngokunga phazamiseki. Ngicela umphakathi ubekezele sizozama ukuthi lo msebenzi usheshe.